News - Farqiga u dhexeeya Mashiinka Mashiinka Mideysan ee Qafilan iyo Tuuboyinka Tooska ah ee Weld
Farqiga udhaxeeya Mashiinka Mashiinka Mideysan iyo Mashiinka Toosan ee Weld
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada tuubood ee alxanka leh ee tuubbada alxanka muquuninta ah iyo tubbada tooska ah ee la shiiday ayaa ah farqiga u dhexeeya qaabka alxanka.
Biibiile welded muquuninta waa steel carbon qaab-dhismeedka carbon carbon hooseeyo ama a steel steel qaab dhismeedka a alloy hoose duudduubay galay maran tuubada leh xagal helix gaar ah (sidoo kale loo yaqaan xagal sameynta), ka dibna la alxamay oo ka samaysan biibiile wadajir ah, kaas oo isticmaali kara strip cidhiidhi ah bir Soo saarida tuubooyin bir ah oo dhexroor weyn leh. Biibiile welded muquuninta inta badan waa muquuninta quusin biibiile welded (SSAW), kaas oo inta badan loo isticmaalaa in lagu dhiso dhuumaha gaaska kala duwan ee Shiinaha. Qeexitaankiisa waxaa lagu muujiyey "dhexroor dibadda ah * dhumucda derbiga". Tuubooyinka muquuninta ee muquuninta ah waa kuwo hal dhinac ah iyo kuwo labalaaban. Dhuumaha alxanka leh waa inay hubiyaan in tijaabada haydarka iyo xoog-qabashada iyo waxqabadka foorashada qabow ee alxamadu ay waafaqsan yihiin qawaaniinta.
Dhuumaha tooska ah ee alxanka leh ayaa ah mid aad u sarreeya isla markaana ah tallaabo saameyn dhawaansho ah oo ay tahay inuu soo saaro lakabka alxanka ka hor inta aan alxanka laga sameynin mashiinka wax lagu shubo, cirifka tuubada maranna waa la kululeeyaa oo la dhalaaliyaa, waana la isku daraa hoos yimaada xoog cadaadis gaar ah, qaboojinta wax taaj oo kale. Mashiinka alwaaxda toosan ee toosan ee tolida leh ayaa loo isticmaalaa kaas oo darafka biibiilaha maran lagu dhalaaliyo biyo-mareenka sareeya (ERW), kaasoo loogu yeero biibiile toosan oo qotodheer qotodheer (LSAW) adoo ku dhalaalaya qaanso koronto.
Awoodda tuubbada wareegga ah ee wareegga ah ayaa guud ahaan ka sarreysa tan tuubbada toosan ee welded. Nidaamka ugu weyn ee wax soo saar waa alxanka qaanso daruuriga ah. Dhuumaha diiran ee muquuninta ah waxay soo saari karaan tuubooyin isku xiran oo leh dhexroorro kala duwan oo balac ah oo isku mid ah, waxayna sidoo kale soo saari karaan tuubooyin isku xiran oo leh dhexroor waaweyn oo leh maran cariiri ah.
Nidaamka wax soosaarka ee tuubada toosan ee tolida leh ayaa si fudud u fudud, inta badan habka wax soo saarka, taas oo u qaybsan kala-soocid aad u sarreeya oo dhejis ah iyo biibiile toosan oo waasac ah. Dhuumaha toosan ee la tolay ayaa leh wax soo saar sare, qiimo jaban iyo horumar deg deg ah.
Si kastaba ha noqotee, marka la barbar dhigo tuubada tooska ah ee tuubada laydhka ah ee dhererka isku midka ah, dhererka alxanka ayaa lagu kordhiyay 30 ilaa 100, xawaaraha waxsoosaarkuna wuu hooseeyaa. Sidaa darteed, dhuumaha yar-yar ee dhex-dhexaadsan ee yar-yar ayaa inta badan tolmo toosan la tolay, halka dhuumaha waaweyn ee alxanka badan la maroojiyo.